Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika si uu uga qayb galo Abaalmarinta Afrik Maaliyadeed ee Gaarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika si uu uga qayb galo Abaalmarinta Afrik Maaliyadeed ee Gaarka ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Muritaaniya • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Madaxweynaha Gudiga Dalxiiska Afrika Alain St.Ange
Abaalmarinta Financial Afrik waa shir sannadeed gaar ah oo loogu talagalay maaliyadda Afrika. Waxay isu keentaa agaasimayaal guud iyo madax sare oo ka kala socda qaybaha maaliyadeed ee kala duwan.
Munaasabadda abaal-marinnada lagu guddoonsiinayo ayaa waxaa gacan weyn ka geysanaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Qaab muuqaal ah, ku dhawaad ​​400 oo is-diiwaangeliyayaal ah ayaa raaci doona labada maalmood ee dacwadaha shirka.
Waxa kale oo jiri doona ku dhawaad ​​200 oo qofood oo ka qaybqaadan doona qaybo ganacsi oo maaliyadeed oo kala duwan.
Wargeyska Financial Afrik ee Pan-African Financial, oo kaashanaya Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Horumarinta Waaxyaha Wax soo saarka ee Mauritania, ayaa xaqiijiyay inay martiqaadeen Alain St.Ange, Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) iyo Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha iyo Badda ee Seychelles, si ay uga qeyb galaan xafladda afraad ee Abaalmarinta Maaliyadda Afrik.
Abaalmarintu waxay ka dhici doontaa Huteelka Al Salam Resort ee Nouakchott, Mauritania, Diseembar 16 iyo 17, 2021, iyada oo hoos imanaysa mawduuca guud ee "Africa in 2050."
Munaasabadda, oo uu ilaalinayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ayaa kulmin doona 200 oo shakhsi oo ka kala socda dhaqaalaha, maaliyadda, ganacsiga iyo, ku dhawaad, ilaa 400 oo is-diiwaangelin ah oo la socon doona shirka iyada oo loo marayo madal go'an.
Nouakchott, waxay noqon doontaa su'aal qeexaya isbeddellada caalamiga ah ee Afrika 2050 si loo siiyo dawladaha iyo ururada qalabyada gorfaynta ee filashooyinka istiraatijiyadeed.
The Afrik Dhaqaale Abaalmarintu waa dhacdo aan caadi ahayn oo isu keenta sannad kasta, tan iyo 2018, khubaro, madaxda sare ee bangiyada, shirkadaha caymiska, hay'adaha dawladda, fintechs, sarrifka saamiyada, iyo maalgelinta maalgashiga, iwm, iyo sidoo kale maamulayaasha iyo go'aan-qaadayaasha Afrika iyo meel kale.
Abaalmarinta Financial Afrik waxay dhammaan doontaa fiidkii iyadoo abaal-marinaha lagu abaal-marin doono shakhsiyaadka ku soo caan baxay qaybahooda kala duwan.
Ku saabsan Guddiga Dalxiiska Afrika
La aasaasay 2018, Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waa urur si caalami ah loogu ammaanay inuu u dhaqmo sidii kicinta mas'uulka ka ah horumarinta socdaalka iyo dalxiiska, ka imaanaya, iyo gudaha gobolka Afrika. ATB waa qayb ka mid ah Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP). Ururku waxa uu siiya xubnahooda u doodis toosan, cilmi baadhis hufan, iyo dhacdooyin cusub. Iyadoo lala kaashanayo xubnaha gaarka ah iyo kuwa dawliga ah, Guddiga Dalxiiska Afrika waxay kor u qaadaan koboca joogtada ah, qiimaha, iyo tayada socdaalka iyo dalxiiska ee Afrika. Ururku wuxuu bixiyaa hoggaan iyo la-talin shakhsi iyo mid-wadareed ururada xubnaha ka ah. ATB waxay ku fidinaysaa fursadaha suuqgeyn, xidhiidhka dadweynaha, maalgashiga, summaynta, horumarinta, iyo samaynta suuqyo caan ah.